कोरोनाको शंका गरिएकी वृद्धाको मृत्यु – BFM 91.2
विराटनगर, २० भदौ । कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका गरिएकी एक वृद्धा महिलाको उपचारका क्रममा कोशी अस्पतालमा आज बिहान मृत्यु भएको छ ।
अस्पतालका बरिष्ठ फिजिसियन डा. लक्ष्मीनारायण यादवले विराटनगर महानगरपालिका–९ की ७० वर्षीया वृद्धाको उपचाररत अवस्थामा अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा बिहान १० बजे मृत्यु भएको बताउनुभयो । वृद्धामा मधुमेहको पुरानो समस्या थियो ।
मधुमेहको पुरानो समस्यासँगै शरीर गल्ने, श्वास फेर्न गाह्रो लगायतका समस्या पनि थपिएपछि उनलाई उपचारका लागि आज बिहान ७ बजे अस्पताल ल्याइएको थियो । तत्काल आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिए पनि वृद्धालाई बचाउन नसकिएको डा. यादवको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार कोरोनासँग मिल्ने लक्षण रहेका कारण पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेर प्रदेश १ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको छ । रिपोर्ट आइसकेपछि मृतकमा कोरोना छ कि छैन भन्ने पुष्टि हुने उहाँले बताउनु भयो ।
रिपोर्ट आएपछि शव व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइने डा. यादवले बताउनु भयो । कोरोना पुष्टि भएमा शव नेपाली सेनाको टोलीले व्यवस्थापन गर्ने र कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा अन्तिम संस्कारका लागि परिवारको जिम्मा लगाइने जानकारी उहाँले दिनु भयो ।
← कोरोना संक्रमित विराटनगरका दुई महिलाको मृत्यु
रगत अभाव टार्न तीव्र बनाइयो रक्तदान →
खोलामा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु
कोरोनाको विषयमा महानगरद्धारा छलफल